E nwere ọtụtụ iri puku ndị ọrụ niile gburugburu ụwa na-eche ihu nke nke data ọnwụ na SD kaadị na ngwaọrụ ndị ọzọ. Onye ọrụ kwesịrị mere, ka n'aka na free ngwá ọrụ na-enyoba iji jide n'aka na data na-natara enweghị ihe ọ bụla nke na hassle. Na a nkuzi top 10 free data mgbake ngwaọrụ ga-enyoba ya ịkụziri ndị ọrụ banyere isiokwu bụ zuru ezu.
Top 10 kaadị ebe nchekwa mgbake software nyochaa
Ọ bụ ihe na biakwa obibia eziokwu na onye ọrụ ịhụnanya na-free na Ya mere free software mgbake ngwá ọrụ na-kọwara dị ka n'okpuru:
Ọ bụ doro anya na ihe kasị mma omume na-eme ka n'aka na-agbake data enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na ihe omume ahụ ebudatara ma wụnye enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge iji na-enweta nsonaazụ kacha mma.
• Obere exe faịlụ
• mfe iji na download
• Download na peeji nke nke mmepe bụ nnọọ mgbagwoju anya
• Ọ na-agba mbọ na-tinye ndị ọzọ atụmatụ na-enweghị ọbụna na-agwa onye ọrụ.
2. Puran faịlụ mgbake
Ihe omume ahụ bụ nnọọ mfe ịmụta na onye ọrụ nwere ike ime ka n'aka na diski na faịlụ na-scanned na kasị ukwuu ọsọ ka tụnyere ndị ọzọ rivals na nke a. Ihe omume ahụ bụ dịkwa nnọọ mfe iji mgbe ọ na-abịa mgbake.
• Ọ bụ dakọtara na ọ bụla OS
• The download faịlụ bụ obere na ìhè na ibu ibu.
• The ụlọọrụ ọrụ na-eleghara anya dị ka usoro ihe omume bụ nanị maka n'ụlọ ọrụ.
3. Disk akuakuzinwo
Ịbụ a free omume a software awade a otutu ya ọrụ. The ọrụ adịghị ga-abụ tech savvy na nke a iji jide n'aka na ihe omume ahụ ebudatara ma wụnye nke bụ ihe kasị mma.
• Ihe omume ahụ bụ dakọtara na niile faịlụ usoro.
• E-akparaghị ókè data mgbake nhọrọ-eji nke a usoro.
• The faịlụ àgwà ọmụma na-mgbe e gosiri
• E nweghị obere version nke usoro ihe omume.
Ọ ka nnọọ mma oke ka tụnyere faịlụ ndị ọzọ mgbake omume ruru ka interface na dị nnọọ mfe iji na-akawanye arụpụta ihe kasị mma maka ọrụ dị ka ndị na-abụghị oru ọrụ nwekwara ike-uru site na ya.
• Ihe omume dị obere size
• The na nchekwa ma faịlụ ụdị echiche ndị dị mfe
• The Mbido faịlụ a agbakwunyere na ndị ọzọ na software omume
• Ọ bụ nanị n'ihi na ndị na-abụghị azụmahịa were.
5. Pandora mgbake
Maa a usoro achoghidi iwebata na niile ka e gosiri magburu onwe. The ọkachamara arụmọrụ na-ahụ na usoro ihe omume dị bụghị nanị mfe iji kamakwa ọkọkpọhi faịlụ weghachiri eweghachi n'ime oge ọ bụla ma ọlị.
• The ọkachamara mode bụ nnọọ mfe iji
• Multiple ngwaọrụ na-akwado n'otu oge
• The nbudata na peeji nke bụ obere tricky
• Ihe omume kpaliri iji tinye nchọgharị toolbar
6. Soft zuru okè faịlụ
Usoro ihe omume e kpọmkwem haziri ịnọgide na-ele mkpa na-achọ n'aka nke ndị ahịa na maka otu ihe ahụ ọ bụ nnọọ mfe iji agbake faịlụ. A dị oke egwu omume nwere ihe exe nke dị nnọọ 500KB.
• Kpamkpam obere
• Obere na size ie banyere 1MB mgbe arụnyere.
• The faịlụ-apụghị previewed
• The ehichapụ faịlụ ahụ ike na-kpugheghịrị
7. ala US data mgbake
Usoro ihe omume a haziri iji jide n'aka na USB draịva na-nyere mkpa na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị inwe arụpụta ihe kasị mma ozugbo usoro ihe omume e arụnyere.
• Ọ bụ nnọọ mfe iji
• The faịlụ preview usoro e agbakwunyere
• The data mgbake e ejedebeghị
• The size nke usoro ihe omume bụ oke buru ibu
8. Amamihe data mgbake
Dabere na Windows Explorer Ọdịdị usoro ihe omume na-eme ka n'aka na faịlụ na-anya n'ime nchekwa na ndị dị na ekpe panel. Ihe omume ahụ bụ mfe iji ruru ka mma atụmatụ agbakwunyere:
• The echichi bụ ezigbo ngwa ngwa
• Multitasking faịlụ mgbake bụ na o kwere omume
• The nchekwa Ọdịdị enye njehie maka onye faịlụ
• Ọ na-mepụtara naanị maka windows os.
Agbakwunyere na pụrụ iche na atụmatụ usoro ihe omume bụ ihe kasị mma na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge. The mfe iji ụkpụrụ na-eme ka ya ọbụna mara mma:
• The interface dị mfe iji
• Ihe omume na-ewe ihe dị nnọọ nta disk ohere
• The naghachi nhọrọ na-adịghị n'ebe
• bụ dakọtara na windows 8.
10. ADRC data mgbake
Mere maka nkezi kọmputa onye ọrụ nke usoro ihe omume e weere dị ka otu nke kasị mma iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri mgbe ọ na-abịa data mgbake.
• mfe iji na ihe kwere nghọta
• Recovers multiple faịlụ n'otu oge
• The interface bụghị ọrụ enyi na enyi na-abụghị tech ọrụ
• Ihe omume ahụ bụ nnukwu na size ntụgharị banyere 1.5GB
Soft zuru okè
Mfe anyị Data mgbake
Maara ihe Data mgbake
ADRC Data mgbake
The Wondershare data mgbake bụ otu n'ime ndị kasị mma na ndị kasị elu ngwá ọrụ nke nwere ike ga-eji na nke a na onye ọrụ fim nwekwara elu mgbe ọ na-abịa arụmọrụ. Ọ bụ ezie na ugwo a usoro bụ ihe kasị mma na-eme ka n'aka na data mgbake na-mere na nkwado nke Wondershare bụ n'ebe iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka onye ọrụ na nke a. Ihe omume ahụ bụ bụghị nanị mfe iji ma na-abịa na a ego azụ nkwa nke ụbọchị 30 nke na-egosi na mmepe bụ oké obi ike banyere ha na omume nke e mepụtara. Ọ bụkwa otu nke kasị mma omume nke jide n'aka na needful a mere dị ka kwa ntụziaka nke ọrụ. Ihe omume ahụ bụ ma maka novice nakwa dị ka tech savvy ọrụ na otu atụmatụ e agbakwunyere ka pacify ma ndị klaasị. Ka tụnyere ihe omume n'elu ngwá ọrụ a bụ 100 ugboro ọzọ tụrụ aro.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Top 10 FREE kaadị ebe nchekwa mgbake software